On sept 1, 2019 12 948
Tontosa ny faha-16 hatramin’ny 23 Aogositra lasa teo ny fidinana ifotony nataon’ny zandarimariam-pirenena avy ao amin’ny kaompanian’n’i Betroka, tany amin’ny faritra Andriry, izay voalaza fa toby famaharan’ny kotro, mpangalatra omby any amin’iny tapany atsimon’ny Nosy iny. Nitarika izany ny kaomanda « chef d’Escadron », Rafanomezana Roby Denisiel, lehiben’ny kaompania. Tanana enina no notsidihina tamin’izany: Tsaramiakatra, Bepeha, Sahabe, Ankoraka, Morafeno, ary Amboandelaka.
Tsy nisiana fifandonana mihitsy nandritra ny dia noho ny fifampiresahana mialoha teo amin’ny raimandreny avy any an-toerana sy ny mpitandro filaminana. Na noheverina hoe isan’ny toerana masiaka dahalo, sy mankahala mpitandro filaminana aza ireo fokontany nolalovana, nizotra tamim-pilaminana ny asa fanentanana sy fanabeazana ny mponina hiala amin’ny fomba ratsy sy mba hametraka fandriampahalemana maharitra.
Resy lahatra ny mponina fa tsy mitondra vokantsoa hony asan-dahalo, zary lasa ankilabao sy adinon’ny fanjakana foibe izy ireo noho izany. Maniry ny hisian’ny fampandrosoana miainga ifotony ny mponina, ary miandrandra ny fiaraha-miasan’ny zandariamariam-pirenena amin’ny fametrahana ny filaminana sy fandriampahalemana maharitra. Vonona ny hanondro ireo zatovo « Malia » ny raimandreny, no sady hamerina ny basy mahery vaika eny am-pelatan’ny malaso.
Ankoatra izay, nampitondra teny ny lehiben’ny zandary any amin’ny tompon’andraikitra isan’Ambaratongany ny mponina mba hijerena akaiky ny lafiny foto-drafitrasa toy ny sekoly, hopitaly, ary ny lalana. Toko telo mahamasa-nahandro amin’ny fampandrosoana.
Marihina fa efa tamin’ny andron’ny Hetsika fampandrian-tany manokana “OPERATION TANDROKA”, no nisy zandary niakatra farany tany an-toerana. Mangataka ny hisokafan’ny zandarimariam-pirenena any an-driry ny mponina, rehefa vita syny lalana. Marihina fa izy ireo no handray an-tanana ny fanamboarana ny lalana amin’ny fanaovana asa “Tagnamaro” .
Nisy ny asabotsy heriny lasa teo ny famerenana basy miisa roa avy amin’ny malaso: Carabine 22 izany.
Manoloana ity hetsiky ny zandary tany Andriry ity, nisy ny fankasitrahana manokana nataon’ny depiote Randrianasolo Nicolas azy ireo. « Mendrim-piderana raha ny zandary ao Betroka ankehitriny. tena mijery akaiky ny fototry ny olana izy ireo fa tsy mihanona fotsiny amin’ny filazana fa famaharan’ny kotro any Andriry. zava-dehibe ho anay izao ezaka izao, satria antoka ahafahana mamerina amin’ny laonininy ny fampandrosoana ifotony. » , hoy izy.
Noararaotin’ity olom-boafidy ity ihany koa ny resaka nifanaovana taminy, nilazana fa betsaka ny zavatra tsy maintsy hatao ho an’ny faritra, satria tena mampalahelo raha ny fanaovana ankilabao azy hatrizay. « Izaho dia hanokana ny vola azo avy amin’ny komity ofotiny misahana ny fampandrosoana taona 2020 ho an’Andriry. Hanaovanay foto-drafitrasa tahaka ny sekoly, hopitaly, tsena, ny lalana izany. Mba ahafahana manatanteraka ny politikam-pampandrosoana anefa, dia mangataka ny fanjakana foibe aho hifanome tanana. Tsy afaka ny hipetraka ho mpanohitra be fahatany manko aho, na tsy lany avy amin’ny antokon’ny mpitondra ankehitriny. ilay fitiavan-tanindrazana sy ny fitiavana ny vahoaka entina ihany koa manko dia zava-dehibe », hoy izy namarana ny resaka.
Marihina fa tsy mijanona tamin’ny famakiana an’Andriry ny hetsika ataon’ny zandray ao amin’n Kaomanian’i Betroka. tsy maintsy hisy ny fanohizana ny fanentanana sy ny hetsika manokana hampiasana ny maha-miaramila, raha misy ny fandikan-dalana voaporofo.
FINOANA KATOLIKA: MANAMAFY NY FINOAN’NY MPINO ETO MADAGASIKARA NY RAY MASINA FRANSOA